आयो खुशीको खबर! भाकल मागेमा मनोकांक्षा पूरा हुने तनहुँको छाब्दी बाराही मन्दिर – Sandesh Munch
September 26, 2020 197
उनका अनुसार उक्त मार्ग सञ्चालनको लागि सडक डिभिजन कार्यालयबाट चारवटा ह्युमपाइप र नगरपालिकाबाट मर्मतको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरी काम शुरु गरिएको हो । शनिबार दुई वटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १५ फुटे मार्ग निर्माण गर्न लागिएको छ ।
उनले भने । “उक्त मार्ग पुनः सञ्चालन गर्न करिब रु पाँच लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।”वर्षायामको समय रहिरहेकाले तत्कालको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक रुपमा छाब्दीमार्ग पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको ब्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानले बताउनुभयो ।
असोज महिना लागेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी राम्रै किसिमले उक्त मार्ग निर्माण गरिने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।तनहुँको सदरमुकामदेखि करिब ८ किलोमिटर पूर्वमा छाब्दी बाराही मन्दिर अवस्थित छन् ।
हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलाम्ये हुने उक्त सडकको कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको भाग तीनवटै सरकारको सहयोगमा कालोपत्र सम्पन्न गरिएको छ । सो मार्गमा कालोपत्र गरिएसँगै हिलो र धुलोमा सामना गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ ।
छाब्दी देवीसँग भाकल मागेमा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजन पूजाअर्चना गर्न आउने गर्दछन् ।
बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ।
आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कमजोर नतिजा सच्याउन केही काम दोहोर्याउनुपरेे पनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्।
प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त हुनाले काममा उत्साह जाग्नेछ। बाेलीकाे भरमा काम सम्पादन हुनेछ।
व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ हुनेछ। रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ।
सरसापटमा धन बाहिरिने देखिन्छ। आम्दानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउन सक्छन्।
तर कामको सन्दर्भमा विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। ठगीमा परिने समय रहेकाले धनमाल सुरक्षामा सजग रहनुहोला।
विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दु:ख पाइनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन्।
अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
अवसरवादीहरूबाट अलि सजग रहनुहोला। काम पूरा नभए पनि आंशिक लाभ अवश्य हुनेछ।
धेरैले कामको तारिफ गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चुनौती समाप्त होला। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ।
आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। तर अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।
तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। हिम्मत गर्दा प्रतिष्ठित जिम्मेवारी हातपार्न सफल भइनेछ। विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अवसर जुट्नेछ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनग्य धन आर्जन हुनेछ। सानाे प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आगन्तुकहरूकाेे उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ।
काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ। धेरै सक्रियता स्वास्थ्यका लागि बाधक बन्न सक्छ ।
अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला। देश–विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। छर–छिमेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलमलिनुपर्ला।
Prevयी ४ राशिका व्यक्ति हुन्छन् निकै उत्कृष्ट, तपाईको कुन ?
Nextशनिबारजन्मिएका मानिसको स्वभाब र भाग्य कस्तो हुन्छ ?
जापानमा रोजगारी ! तलब १लाख ८७ हजार, पूरा हेर्नुहोला।
कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अस्वीकार